Muxuu moobilku u kululaa iyo sida loo hagaajiyo | Androidsis
Ignacio Sala | 21/06/2021 22:00 | Batariga, Tababarada
Waa sidii caadiga ahayd in la arko sida casrigayagu wuu kululaanayaa badan xagaaga, in ka badan sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee, kululaynta taleefannada casriga ah marwalba lama xiriirin xilligan sanadka, maadaama aysan ahayn oo kaliya dhibaatada xilligan sanadka.
Waxaa jira dhowr arrimood oo saameynaya kululaynta, ama aan ahayn, bartayada. Hadaad rabto inaad hesho waa maxay sababta kululaynta in terminalku ku xanuunsado iyo sidee u xalin kartaa, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wado aqrinta maqaalka soo socda.
1 Tooska qoraxda
2 Arimaha deegaanka
3 Loading terminal
4 Ciyaaraha dalbanaya
5 Ku ciyaarida waxyaabo badan oo warbaahin ah
6 Shaashadda saar muddo dheer
7 Falanqaynta fiidiyowga
8 Qaadashada sawiro iyo duubista fiidiyowga
9 Dhibaatooyinka qalabka
10 Barnaamijyada asalka ah
Kuleylka saaxiib kuma lahan aalad elektiroonig ah. Dhammaan qalabka elektarooniga ah waxaa loogu talagalay inay joojiyaan shaqada markay gaaraan heerkul cayiman si looga hortago aaladda inay weligeed shaqeyso.
Haddii aad uga tagtay taleefankaaga casriga ah qorraxda, inta badan xagaaga, waxay u badan tahay, ma aha oo kaliya inuu gubanayo, laakiin sidoo kale shaashadda terminal-kaaga ma shaqeynayo ama waxay muujineysaa farriin isagoo na ogeysiinaya heerkulka xad-dhaafka ah ee xarunta.
Waa inaan iska ilaalino sida ugu macquulsan, uguna tagno casriga casriga ah qorraxda, gaar ahaan xagaaga iyo xitaa muddo gaaban. Haddii xarunteennu ay u muuqatay qorraxdu toos oo aysan u shaqeynaynin, waa inaan sugno inta ay ka qaboojineyso ku soo noqoshada nolosha.
Kuleylku waa cunsur kale oo sababa kororka kuleylka bartayada. Goorma heerkulka daafaha ayaa ka sarreeya 30 darajo, Way fududahay in xarunteena ay dhibtoonto, ma bilaabeeyso inay si sax ah u shaqeyso xitaa hadii aanan fulineynin howlo u baahan dhamaan awooda qalabka.
Xaaladahan oo kale, haddii aan u baahanahay inaan sii wadno isticmaalkeeda, sida ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah ka saar kiiska oo isticmaal la'aan la'aan illaa iyo intaanan u baahnayn mar kale.
Si aad u yar ama ka yar, dhammaan boosteejooyinka ayaa kululaanaya markii la soo oogay. Si kastaba ha noqotee, Waxaan ogaaneynaa kuleylka inbadan xagaaga, gaar ahaan marka aan isticmaalno nidaamka lacag-bixinta wireless-ka ah. Qalabka wax lagu xiro ee wireless-ka ah ayaa kululaada inta lagu gudajiro nidaamka lacag bixinta, kuleylka loo gudbiyo qalabka.
Haddii aad subaxdii kacdo oo aad aragto sida aaladdaada aan si buuxda loogu soo oogin, waa sababta oo ah terminaalka ayaa si otomaatig ah u joojiyay lacag-bixinta in muddo ah kuleyl xad dhaaf ah oo ka yimaada saldhiga lacag bixinta. Dareenkan, waxa ugu fiican ee la talin karo inta lagu jiro bilaha kulul waa in la isticmaalo xeedho leh fiilo.
Ka ciyaarista kali taleefankaaga casriga ah lama mid aha ciyaar ciyaar taas ubaahan dhamaan awooda taleefankeena casriga ah. Ciyaaraha ugu baahida badan, sida Fortnite, PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 ... waa cayaaro processor-ka ushaqeynaya si uu ugu shaqeeyo ugu badnaan, si kolba goor dhaw ama goor dambe ay had iyo jeer u kululaadaan kuleylka casriga ah.
Laakiin marka lagu daro, adoo ka dhigaya habka ugu sarreeya, sidoo kale waxay cunaan qadar badan oo batari ah. Xalka dhabta ah ee dhibaatadan, runtii ma jiraan. Haddii aad jeceshahay ciyaarahan, kuuma sheegayno inaadan ciyaarin. Waxa kaliya ee aad sameyn karto si aad uga hortagto inay ka kululaato sida ay ahayd waa inuusan qalabku ka qaadin inta aan ciyaareyno.
Ku ciyaarida waxyaabo badan oo warbaahin ah
Qaybtani waxay xiriir la leedahay tii hore. Loo maqli warbaahinta waa mid kale oo ka mid ah qaybaha saaray hawlgalka processor-keena, gaar ahaan marka faylasha aan ciyaareyno aysan ka koobnayn YouTube-ka (sababtoo ah koodhka ay isticmaasho).
Shaashadda saar muddo dheer
Gaar ahaan marwalba waan ahaan jiray ka cagajiidaya in aan u adeegsado taleefankayga casriga ah hage GPS. Marka ay timaado tagitaanka cinwaan, 99% waqtiga, waxaan aqaan wadada weyn wadada, marka waxaan isticmaalaa kaliya markaan horeyba u joogo magaalada.
Shaashaddu waa mid ka mid ah cunsuriyada ku shaqeeya batteriga ugu badan terminal-ka. Intaa waxaa dheer, waa mid kale oo ka mid ah canaasiirta in saameyn ku yeesho heerkulka qalabka. Ilaa iyo inta suurtagal ah, isticmaal kaliya marinka marka aad joogto magaalada ay ku taal cinwaanka aad rabto inaad booqato, maahan inta lagu jiro safarka wadada.
Kharashka shaashadda, waa inaan ku darnaa isticmaalka joogtada ah ee GPS si markaa dalabku u ogaado marwalba halka aan ku suganahay khariidada oo aan na siino tilmaamaha ugu saxsan ee aan ku gaari karno halka aan u socono.
Mid kale oo ka mid ah geeddi-socodka wax badan ka dhigaya processor-ka qalabkeenna iyo sidaas darteed, wuxuu saameeyaa heerkulka qalabka, waa farsamaynta fiidiyowga. Haddii aan u isticmaalno casriga si aan wax uga beddelno fiidiyowyada, haddii ay aad u dheer yihiin, xariggu wuxuu ku dhammaanayaa kuleyl.
Markasta oo aan kari karno, waxaa lagugula talinayaa in aad howlahaas tafatirka u qabato si raaxo leh kombiyuutarka hortiisa. Haddii aysan macquul aheyn awood la'aan awgeed, waxaan sugi karnaa heerkulka aaggu inuu ka hooseeyo 30 darajo.
Qaadashada sawiro iyo duubista fiidiyowga
Haddii aan bilowno inaan duubno fiidiyowyo dhaadheer ama aan qaadno sawirro badan oo waqti gaaban ah, terminaalkeennu wuxuu ku dambayn doonaa kuleyl. Sababta ma aha mid kale oo aan ahayn isticmaalka processor ee ay sameeyeen dhammaan kamaradaha si aad ugu hagaajiso qabsashada barnaamijyada aad soo diyaarisay.
Markasta oo ay suurtagal tahay, waa inaan samee casrigayaga nasashada xaaladdan oo kale. Sida iska cad, haddii ay tahay dhacdo gaar ah oo aan dooneyno inaan xafidno, gabi ahaanba waxba kuma dhici doonaan xarunteena haddii ay kululaato muddo gaaban.
Maaha inaan haysto mania gaar ah oo loogu talagalay boosteejooyinka Aasiya ee noocyada caanka ah, laakiin iyada oo ku saleysan khibradeyda, waxaan awooday inaan xaqiijiyo sida inta badan boosteejooyinkan ay u kululaadaan adoo samaynaya waxqabad kasta, ha noqoto internetka, internetka oo la hubiyo ... shaqooyinka aan u baahnayn awooda koontada.
Haddii aad leedahay terminaal Aasiya ah oo dad aad u yar yaqaanaan, ha ka welwelin, waa wax iska caadi ah. Maaddaama uu kuleylku sii kordhayo, nolosha batteriga ayaa si weyn loo dhimay. Haddii aad ka fogaan karto inaad soo iibsato qalabkan mustaqbalka, si kasta oo ay u jaban yihiin, dhammaantood way fiican yihiin. Xal kale looma hayo dhibaatadan.
Barnaamijyada asalka ah
Haddii terminaalkaagu kululaado oo mid ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee aan kor ku tusay ay la xiriiraan isticmaalka aad ku sameyneyso boosteejadaada, waa inaad fiirisaa codsiyada ka socda asalka.
Haddii lagu daro kululaynta xad dhaafka ah, waxaad ogaanaysaa sida batteriga ayaa si aan caadi ahayn u daadanaya Wax walba waxay muujinayaan in ay jiraan waxoogaa codsi ah oo ku saabsan asalka oo dhibaato ku keenaya qalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Muxuu moobilku u kululaa iyo sida loo hagaajiyo
5-ta barnaamij ee ugu fiican ee loogu talagalay Android